Ingiriiska Iyo Wadamo Kale Oo Midawga Yurub Ku Dacweeyey Dikhawga Hawada
(Hadhwanaagnews) Thursday, May 17, 2018 15:37:15
Midowga Yurub ayaa maxkamad la tiigsaday Ingiriiska oo lagu eedeeyey in uu mudo dheer ka cago jiidayo inuu fuliyo xeerka xadidaada neefta nitorogen dioxide.
Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga, Romania iyo Hungary ayaa Iyagana dacwado ah in ay ku xad gudbeen xadidaadda dikhowga ah loo gudbiyey maxkamadda.
Gudoomiyaha gudida deegaanka Midowga Yurub, Karmenu Vella, ayaa sheegay in Midowga Yurub u "xil ka saaranyahay inuu isaga oo ka wakiil ah muwaadiniintiisa" qaado tallaabo sharci.
Ingiriisku waxa uu ballan qaaday inuu si buuxda dhawaan wax uga qaban doono dikhowga, laakiin Ingiriisku wuxu mudan doonaa ganaax dhan malaayiin gini ilaa inta uu wax ka qabanayo dhibaatada taagan.
style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">Dadka u ololeeya daryeelka deegaanka ayaa sheegay in dacwaddaa lagaga furay Ingiriiska Maxkamadda Cadaaladda Yurub ay tahay tallaabo Midowga Yurub ku muujinayo in aan la kala go'in xataa hadii Ingiriisku ka baxay Midowga.
Wasiirka deegaanka Ingiriiska, Micheal Gove, ayaa hore ugu ballan qaaday in maamulka deegaanka aan waxba iska bedeli doonin xataa marka Ingiriisku ka baxo Midowga. Laakiin waxa uu todobaadkii hore carrabka ku dhuftay in wakaaladda ilaalinta daryeelka deegaanka Ingiriiska uu kula taliyey in la dhiso marka Ingiriisku ka baxo Midowga ay si toos ah u yeelan doonto awood ay xukuumadda maxkamad kula tiigsan karo.
Margherita Tolotto oo ka tirsan ururka daryeelka deegaanka Yurub ee ayaa tidhi "sheegidda dacwadda maxkamadda la geeyey waa in aanay cidna la yaab ku noqon, waayo dalalkaas dacwadahooda maxkamadda loo gudbiyey oo dhami waxay hore u qabeen digniino faro badan".